Case marmar Phone
waxyaabaha cusub OEM kiiska phone dhar for Iphone m ...
Waa maxay sababta Dooro The Case Iml Phone?
technology IML isticmaali film PET inay sii daayaan qaababka. in la sameeyo hubin doona markii ugu deliery gaaban.
midab kala duwan
design OEM. Color iyo hannaanka la beddeli karaa wakhti kasta inta lagu guda jiro soo saarka.
PET fILIN waa technology ugu weyn ee IML ah. muuqaalka macaan oo qurux badan, iska caabin ah la xoqo excellet.
Marna way libdhi
PET fILIN-The hannaankii waxaa gudaha daabacaadda. Marna ha ku baxayn, Had iyo dhalaalaya iyo midabo.